Return Path vs 250ok: Rindrambaiko sy serivisy fanaterana mailaka | Martech Zone
Nahoana no zava-dehibe ny fandefasana mailaka? Araka ny Tatitra momba ny kalitaon'ny data momba ny mailaka 2015 nataon'i Experian, 73% amin'ireo mpivarotra no nitatitra fa manana olana amin'ny fandefasana mailaka. Ny lalan'ny fiverenana dia tatitra fa 20% mahery ny mailaka ara-dalàna no tsy hita. Tsy isalasalana fa miatrika olana amin'ny fahaterahana ireo orinasa, ary misy fiatraikany ratsy amin'ny faran'ny farany.
Nandritra ny taona maro, Làlana miverina no mpitarika indostrialy eo amin'ny sehatry ny fandefasana mailaka tsy misy fifaninanana firy, raha misy. Tamin'ny fahatongavan'i 250ok, ary tobin'ny mpanjifa izay misy orinasa toa an'i Adobe, Marketo, ary ny Act-On, manana ny ara-dalàna ihany koa ny indostria safidy ho an'ny Path Return ho an'ny rindrambaiko azo andefasana sy serivisy matihanina.
Midira amin'ny fitsangatsanganana vokatra
Rehefa mampitaha ny lalan'ny fiverenana sy 250ok, lohahevitra telo matetika no tonga - Fanamarinana, Data Panel, ary serivisy matihanina.
Fomba fanamarinana ny lalana miverina
Ny fanamarinana dia mofo sy dibera Return Path nandritra ny taona maro. Araka ny filazan'ny mpanjifa taloha iray tamin'ny Internet, sarobidy tamin'ny lanjany tamin'ny volamena izany taloha. Androany, ny fototr'asa fanamarinana dia toa mifototra amin'ireo mpivarotra mailaka mampifanaraka ny programa mailaka ataon'izy ireo amin'ny fomba fanao tsara indrindra. Rehefa avy nahatratra io fenitra voalohany io dia takiana amin'ny mpanjifa ny mijanona ao anatin'ireo metrika ireo mandritra ny fotoana maha-voamarina azy ireo. Ny tsy fanaovana izany, araka ny antenainao, dia miteraka olana amin'ny fahaterahana.
Ho an'ireo mpanjifa izay mitoetra ao anatin'ny refy, dia ampanantenaina izy ireo fanatsarana ny fandefasana mailaka any amin'ny AOL, Yahoo, Microsoft, Comcast, Cox, Cloudmark, Yandex, Mail.ru, Orange, SpamAssassin, ary SpamCop.
Na izany aza, ny talen'ny Global Deliverability ao Oracle, Kevin Senne, dia nitatitra fa manana ohatry ny mpanjifa fanamarinana mifanaraka amin'ny olana ara-pitaterana miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny serivisy serivisy amin'ny Internet (ISP). Mahaliana ny mahafantatra hoe matetika ny fanakanana ny mpiara-miasa ISP no miseho ho an'ny mpanjifa mpankato, ary ny fomba hitrangan'izany.
Araka ny Return Path, mazàna ny antsasaky ny ankamaroan'ireo lisitra dia maherin'ny Gmail, noho izany ny Certification dia tsy manome fiakarana ara-teknika any. Milaza izy ireo fa ny mpanjifa Certification dia miha-mahomby kokoa amin'ny Gmail noho ny mpandefa tsy Certified, zavatra iray izay manondro ny fenitra fanao tsara indrindra takian'izy ireo amin'ny mpanjifa. Ny vaovao tsara eto dia misy olona afaka manaraka fomba fanao tsara indrindra nefa tsy mila mandoa denaria amin'ny mpivarotra rehetra akory, fa mila fampiasa fitaovana ianao hanaraha-maso ny programa ataonao.
Noho izany, ny fanontaniana lehibe ho an'ny mpanjifa Certification dia ohatrinona ny fahombiazan'izy ireo amin'ny fahaterahana dia avy amin'ny maha mpandefa tompon'andraikitra mifanohitra amin'ny fisondrotana ara-teknika omena ireo mpiara-miasa amin'ny ISP. Ho an'ny mpanjifa Certification amin'izao fotoana izao, ny fanaovana andrana mifanila aminy dia hampiharihary ny habetsaky ny fisondrotan'izy ireo avy amin'ny fanarahana fomba fanao tsara indrindra manoloana ny fampiakarana karama azony amin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka ISP. Mila ezaka kely ny fitsapana, saingy fantatry ny mpivarotra tarihan'ny data fa ny fandrefesana no lakilen'ny fahombiazana.
250ok dia tsy manome Certification. Ny fomba fiasan'izy ireo dia mifototra amin'ny fanarahana fanao faran'izay tsara ihany koa, toa ny Path Path, fa tsy ny maodely fandoavam-bola, fahefan'izy ireo kosa ny mpandefa miaraka amin'ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy mba hitantanana tsara ny fandaharan'izy ireo sy hahatratrarana laza malaza.
Miverina data Data Panel Panel
Miverina Path dia mampiasa angon-drakitra mailaka mitambatra amin'ny zana-kazo handrefesana ny fahaterahana, raha 250ok mampiasa lisitra zana-kazo sy data-fandraisana ny mpandray.
Ny olana iray mety hitranga amin'ny angon-drakitra tontonana dia ny fahafantaran'ny panelists ny azy angonina ny data ary averina amidy. Nahazo alalana ve izy ireo? Raha tsy izany, mety amin'ny marikao ve izany? Averiko indray, tsy fantatro ny niandohan'ny tontonana Return Path ary raha nanaiky handray anjara ny mpampiasa, dia mba zahao izy ireo.
Amin'ny maha mpivarotra ahy dia tiako ny angon-drakitra tontonana fahitana afaka manome. Fa raha ny tahirin-kevitra tontonana Return Path, izy ireo tatitra fa ny 24% amin'ireo mpikirakira azy ireo ihany no mampiasa io kaonty io ho toy ny kaonty mailaka voalohany.
Rehefa miatrika ny angon-drakitra misy karazany, ilaina ny manontany ny mpivarotra rehefa novaina farany ny tontonana. Ny Survivor Bias dia olana iray tsy tianao hidirana ao amin'ny tontonanao. Avereno jerena miaraka amin'ny Path Path.
Mikasika ny fametrahana boaty inbox dia ny olana matetika dia ny angon-drakitra tontonana dia hampiseho tsy latsaky ny 100% ny fametrahana boaty ao amin'ny Outlook sy Gmail noho ny sivana ataon'ny mpampiasa tsirairay. Vokatr'izany dia afaka manontany tena ireo mpandefa raha misy elanelana fametrahana eo amin'ny inbox vokatry ny sivana ataon'ny mpampiasa na raha misy ny tena olana eo amin'ny fitaterana.
250ok tsy mampiasa angona tontonana mailaka. Fomba fijerin'izy ireo fa ny angona azo ampiharina dia mitoetra ao anatin'ny data momba ny firotsahana izay azonao ampiasaina amin'ny alàlan'ny mailaka Informant 250ok, izay manome data, antsipiriany momba ny hetsika ho an'ny mpampiasa, ankoatry ny Analytics nomen'ny mpamatsy tolotra mailaka anao (ESP). Ny fitambaran'ireto fitaovana ireto no hanome anao ny mailaky ny mailaka feno indrindra misy.
Làlana miverina ary 250ok Professional Services
Ireo orinasa roa ireo dia manolotra fifampidinihana ho an'ny mpanjifa. Ny tena maha samy hafa azy: ny Path Return dia nanangana ekipa mpanolotsaina anatiny, raha 250ok dia nifidy ny hiara-hiasa amin'ireo maso ivoho any ivelany.
Na inona na inona raha mieritreritra ny lalan'ny fiverenana ianao na 250ok, manakiana ny fametrahana fanontaniana sarotra amin'ny consultant izay hitantana ny kaontinao. Ho ahy dia tsy maninona na mifampiraharaha amin'ny consultant ao an-trano na masoivoho mpiara-miasa amiko aho. Mila olona manana traikefa an-taonany ianao fa tsy amam-bolana, ary mila fifandraisana amin'ny ISP lehibe izy ireo raha ilaina ny fanarenana. Mangataha tohiny sy fanondroan'ny mpanjifa ny consultant izay ho olonao. Ny fidirana amina consultant zandriny izay mamaky script dia mety hiteraka olana lehibe amin'ny programa.
Famerenana haingana ny 250ok sehatra
Koa satria 250ok no sehatra vaovao eo amin'ny sehatra, tiako ny mandrakotra haingana ny maodelin'izy ireo: Informant Reputation, Inbox Informant, Email Informant, Design Informant, ary DMARC. Rehefa mampiasa ny modules efatra amin'ny fampisehoana, ny mpivarotra dia manana fitaovana fampitaovana feno ahafahana mitantana ny programa.
Reputation informant - Reputation Informant dia misy karazana fiasa manara-maso ny lazan'ny mailakao.
Iray amin'ireo lafiny malaza indrindra amin'ny 250ok ny vahaolana dia azy ireo tambajotra fandrika spam misy domains 35 tapitrisa eo ho eo. Ny fidirana amin'ity data ity dia tsy misy idiran'ny mpivarotra mailaka. Ny habe sy ny kalitaon'ny tamba-jotra spam, ary ny fidirana an-tsokosoko ao amin'ireny tahirin-kevitra tena izy ireny (oh: ny fandrika isanandro, IP, domain, tsipika lohahevitra, firenena) dia tena manintona ahy amin'ny maha mpandefa ahy. Ny fanaraha-maso ny lisitra mainty? Azo alaina amin'ny fotoana tena izy ity angona ity, ary azonao atao ny mametraka fampandrenesana namboarina mba hifantoka amin'ny lisitra izay tena mahaliana anao indrindra. Tiako ny malefaka amin'ny fanaingoana izay mahazo fampandrenesana sy ny fomba fandefasana izany fampandrenesana izany (oh: mailaka, SMS).
Dashboard DMARC - Raha jerena ny firoboroboan'ny fanandramana spam sy phishing, ary ny fihetsiky ny Gmail vao haingana, dia hetsika tsara izany 250ok hanampiana dashboard DMARC. Azonao atao ny mampiasa ny "fomba fandinihana" ary hamakafaka ny fanarahan-dalàna ilay rindrambaiko ary hanome sosokevitra fanitsiana, izay hitarika anao any amin'ny quarantine na holavina ny politika. Ny vokatra dia misy ny sarintany fandrahonana, ny tatitra momba ny forensika ary ny isa fanarahan-dalàna.
250ok dia manolotra ny fahaizana mampifantoka ny anao fanaraha-maso loop loop (FBL). Ny fahafantarana ny fotoana itarainan'ny mpamandrika anao dia manakiana, satria ny hafainganan'ny valinteninao dia antony iray lehibe hitazonana ireo mpanome tolotra internet (ISP) tsy hianjera amin'ny lazanao.
Ary koa, 250ok dia tafiditra Microsoft Smart Network Data Services (SNDS) ary Signal Spam ho UI mora mandevona. Ity fampahalalana ity dia tonga avy amin'i Microsoft ho toy ny antontam-baovao tsy misy fotony, ary ny mpivarotra sasany dia tsy nahavita zavatra firy tamin'ny fanatsarana ny traikefa tamin'ny fandaniana izany data izany. 250ok efa lasa lavitra ny lalan'izy ireo mba hahamora azy.
Inbox Informant - Ny mpivarotra dia mila fitaovana maharitra amin'ny fotoana fohy hanampiana azy ireo hiditra ao anaty boaty. Inbox Informant dia mampiseho aminao hoe ohatrinona ny mailakao no tonga ao anaty boaty, spam, ary ohatrinona no tsy hita. Azonao atao ny mamaha ny olan'ny fandefasana mailaka manokana amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra, izay tena manampy tokoa.
Iray amin'ireo fahasamihafana lehibe hitako teo 250ok ary Return Path dia tolotra lisitra 250ok. Alohan'ny hahitanao ny fampitahana ny fandrakofana dia ireo mpamatsy boaty mailaka alefanao mailaka ihany no masomboly manandanja. Fe-potoana. 250ok nanamboatra fitaovana fanatsarana lisitra zana-kazo hanampiana anao amin'ny laser amin'ireo mpampiantrano izay raharaha. Amin'ny ankapobeny, misy fahasamihafana kely eo amin'ny fandrakofana lisitra miaraka amin'ireo orinasa roa mitazona masomboly manokana, fa ao kosa ny parodiany amin'ny ankamaroan'ny mpampiantrano lehibe rehetra. Ireo orinasa roa ireo dia mety manana izay ilainao na hahazo azy.
Mpandefa mailaka - Ao amin'ity tontolon'ny data ity dia misokatra ny CTR ary tsy mitantara ny zava-misy rehetra izy ireo. Ny fampiasana pixel fanarahana 250ok miaraka amin'ny Email Informant dia milaza aminao hoe iza no mpamaky mamaky hafatra sy haharitra hafiriana, ary inona ny karazana fitaovana sy ny rafitra fampiasan'izy ireo.
Iza amin'ireo rohy na CTA no nanao ny tsara indrindra? Manatsara ny fotoana fandefasana ve ianao? Ny mailaka informant dia manampy anao hahatakatra izay mandeha sy izay tsy mandeha mba hahafahanao mandray fanapahan-kevitra haingana sy haingana.
Design Informant - Ny mpivarotra mailaka rehetra dia mila manao tombana mialoha ny sidina manodidina ny famolavolana 250ok manana fampifangaroana ivelan'ny boaty amin'ireo mpivarotra rendering Email amin'ny Acid ary Litmus.
Design Informant dia mizaha toetra ny fahaizanao manohitra ny sivana spam mahazatra toy ny Barracuda, Symantec, Spam Assassin, Outlook, ary maro hafa hahafahanao mamantatra sy manamboatra ireo fikafika alohan'ny hamoahana ny fampielezankevitrao.
Heveriko fa ny fananana mpivarotra roa tena mitovy nefa somary samy hafa kely eo amin'ny sehatry ny fandefasana mailaka dia zavatra tsara ho an'ny indostria. Raha miantsena amin'ny lozisialy azo alefa ianao, ao anatin'izany ny fitaovan'ny DMARC, na ny serivisy fanoloran-kevitra, mamporisika anao hifandray amin'i Return Path aho ary 250ok ho an'ny demo, ary ampitahao ho anao.
Misaotra tamin'ny famakiana ary raha manana hevitra momba ny Path Return ianao na 250ok vokatra, azafady aza misalasala mizara izany vaovao izany amiko, na maneho hevitra eto ambany.
Fampahafantarana: Oracle dia mari-pamantarana voasoratra anarana an'ny Oracle Corporation sy / na ireo mpiara-miasa aminy. Return Path dia mari-pamantarana voasoratra anarana an'ny Return Path, Inc. 250ok dia mari-pamantarana voasoratra anarana an'ny 250OK LLC. 250ok Mpanohana ny tranokalanay ary sakaizan'ny mpanorina Greg Kraios aho.
Tags: AndroidAndroid 2.3Topi-maso mailaka Android 2.3Fitsapana mialoha amin'ny mailaka Android 2.3Android 4.2Topi-maso mailaka Android 4.2Fitsapana mialoha amin'ny mailaka Android 4.2Topi-maso mailaka AndroidFitsapana mialoha amin'ny mailaka AndroidAOL MailAOL mailaka ChromeAOL mailaka ny topi-maso mailaka ChromeAOL mandefa fitsapana mialoha ny mailaka ChromeTopi-maso mailaka AOL MailFitsapana ny mailaka AOL MailAOL Mail Internet ExplorerTopi-maso mailaka AOL Mail Internet ExplorerFitsapana mialoha ny mailaka AOL Mail Internet ExplorerApple Mail 6Apple Mail 6 mailaka previewFitsapana mialoha mailaka Apple Mail 6BlackBerry 4 OSHijery mailaka BlackBerry 4 OSFitsapana ny mailaka BlackBerry 4 OSBlackBerry 5 OSHijery mailaka BlackBerry 5 OSFitsapana ny mailaka BlackBerry 5 OSmpampahalala lisitra maintyJamba lokoTopi-maso ny mailaka Blindness lokoFitsapana mialoha ny mailaky ny jamba lokofanateranaDMARCfanakanana ny mailakamailaka mailakafitsapana ny famolavolana mailakampampahalala mailakaangona tontonana mailakalazan'ny mailakaGmailFampiharana GmailTopi-maso ny mailaka amin'ny App GmailFitsapana ny mailaka amin'ny mailaka App an'ny GmailGmail ChromeHijery mailaka Gmail ChromeFitsapana ny mailaka Gmail ChromeGmail FirefoxHijery mailaka Gmail FirefoxFitsapana ny mailaka Gmail FirefoxGmail Internet ExplorerHijery mailaka Gmail Internet ExplorerFitsapana ny mailaka Gmail Internet Explorergreg kraiosfanadihadiana amin'ny boatympampahalala inboxfametrahana boatyiPadTopi-maso mailaka iPadFitsapana mialoha ny mailaka iPadipad miniTopi-maso mailaka iPad MiniFitsapana ny mailaka iPad MiniiPad-RetinaiPad Retina mailaka previewFitsapana ny mailaka iPad RetinaiPhone 4siPhone 4s mailaka previewFitsapana mialoha mailaka iPhone 4siPhone 5Topi-maso mailaka iPhone 5Fitsapana mialoha amin'ny mailaka iPhone 5iPhone 5siPhone 5s mailaka previewFitsapana mialoha mailaka iPhone 5siPhone 6Topi-maso mailaka iPhone 6Fitsapana mialoha amin'ny mailaka iPhone 6iPhone 6 PlusiPhone 6 Plus mailaka mialohaFitsapana mialoha mailaka iPhone 6 Plusfamindrana ispfanandramana mailaka isplitmusLotus Notes 6.5Fanamarihana mailaka Lotus Notes 6.5Fitsapana ny mailaka Lotus Notes 6.5Lotus Notes 7Fanamarihana mailaka Lotus Notes 7Fitsapana ny mailaka Lotus Notes 7Lotus Notes 8Fanamarihana mailaka Lotus Notes 8Fitsapana ny mailaka Lotus Notes 8Lotus Notes 8.5Fanamarihana mailaka Lotus Notes 8.5Fitsapana ny mailaka Lotus Notes 8.5MAC OS XTopi-maso mailaka MAC OS XFitsapana ny mailaka MAC OS XWINDOWS MICROSOFTMICROSOFT WINDOWS topi-maso amin'ny mailakaFitsapana ny mailaka MICROSOFT WINDOWSOutlook 2000Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2000Fitsapana ny mailaka Outlook 2000Outlook 2002Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2002Fitsapana ny mailaka Outlook 2002Outlook 2003Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2003Fitsapana ny mailaka Outlook 2003Outlook 2007Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2007Fitsapana ny mailaka Outlook 2007Outlook 2010Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2010Fitsapana ny mailaka Outlook 2010Outlook 2011Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2011Fitsapana ny mailaka Outlook 2011Outlook 2013Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2013Fitsapana ny mailaka Outlook 2013Outlook.com (Firefox)Topi-maso mailaka an'ny Outlook.com (Firefox)Fitsapana mialoha ny mailaka an'ny Outlook.com (Firefox)Chrome Chrome Outlook.comTopi-maso mailaka an'ny Outlook.com ChromeFitsapana ny mailaka amin'ny Outlook.com ChromeOutlook.com Internet ExplorerTopi-maso mailaka an'ny Outlook.com Internet ExplorerFitsapana mialoha ny mailaka an'ny Outlook.com Internet ExplorerLahatsoratra tsotraTopi-maso mailaka amin'ny Plain TextFitsapana mialoha ny mailaka Plain Textmpampahalala lazalalana miverinamiverina lalan-kafafiverenan'ny lalana miverinafandrika spamtambajotra fandrika spamspam triggersThunderbird farany WEB-BASEDThunderbird fijerena mailaka farany amin'ny WEB-BASEDThunderbird fanandramana mailaka voalohany amin'ny alàlan'ny WEB-BASEDWindows Phone 8Topi-maso mailaka Windows Phone 8Fitsapana mialoha ny mailaka Windows Phone 8Yahoo! Mail ChromeYahoo! Alefaso mailaka ny mailaka ChromeYahoo! Fitsapana ny mailaka Chrome mailakaYahoo! Mail FirefoxYahoo! Hijery mailaka ny mailaka FirefoxYahoo! Fitsapana ny mailaka mailaka Firefox FirefoxYahoo! Mail Internet ExplorerYahoo! Hijery mailaka ny mailaka Internet ExplorerYahoo! Fitsapana ny mailaka amin'ny mailaka Internet Explorer
Inona ny Google RankBrain?
7 Okt 2014 amin'ny 2:35 PM
Fitaovana marketing mailaka vaovao lehibe, heveriko fa ho gaga amin'ny mailaka ny olona rehefa mahazo angon-drakitra tsara kokoa.
Siantifika data matotra
16 Aogositra 2016 à 10:47
Eny, namono ny maha-ara-dalàna an'ity lahatsoratra ity "250ok dia mpanohana ny tranokalanay ary naman'ny mpanorina Greg Kraios aho"
Aug 17, 2016 amin'ny 10: 02 AM
Eny, mpinamana amin'i Greg aho izay nanana izany fahitana izany folo taona lasa izay ary mifaninana amin'ny orinasa goavambe iray manana loharanon-karena an-taonany maro. Faly aho manampy amin'ny fampielezana ny teny momba ny vahaolana mahagaga. Ary tena mankasitraka an'ireo mpanohana anay izay manohana ity tranokala ity aho ary manampy ahy hanome fampahalalana bebe kokoa ho an'ny mpamaky anay. Mangarahara ny fampahafantarana ary tokony hotehaka, fa tsy esoin'ny mpaneho hevitra tsy mitonona anarana matahotra loatra hanome anarana tena izy na adiresy imailaka marina.
Aug 17, 2016 amin'ny 11: 11 AM
Misy mpanjifa Cert hafa eto mahita sakana amin'ny mpiara-miasa amin'ny Return Path? Ary misaotra amin'ny mangarahara, Douglas! Tadidio fa tsy misy asa tsara tsy voasazy. 😉
Aug 17, 2016 amin'ny 11: 45 AM
Douglas, misaotra anao tamin'ny lahatsoratra; Ekeko fa zava-dehibe ny mahafantatra momba ny safidinao rehefa misafidy mpiara-miasa amin'ny fanaterana. Manahy aho, na izany aza, fa tsy afaka nanolotra toerana tena tsy miangatra ianao amin'ny fampitahana anao satria manana fifandraisana matihanina sy manokana amin'ny 250ok ianao, araka ny voamarikao tamin'ny fanambaranao. Nanamarika fanontaniana maromaro ihany koa aho tao anatin'ny famakafakanao ny Return Path, ary diso fanantenana aho fa tsy nanatona anay hanampy amin'ny famenoana ireo banga ireo. Amin'ny maha mpitantana varotra vokatra ho an'ny vahaolana amin'ny Email Optimization, dia ho - ary mbola faly aho hanampy anao hamaly ireo fanontaniana ireo.
Mba hamaliana ny iray amin'ireo fanontanianao - eny, ny mpikambana ao amin'ny tontolon'ny Consumer Network dia nanome alalana tokoa ny Return Path mba hidirana amin'ny fampiasana ny boaty mailaka sy ny angon-drakitra mifandraika amin'izy ireo. Faly aho manome fampahalalana bebe kokoa momba izany raha tianao.
Ao amin'ny Return Path, tena mirehareha amin'ny angon-drakitra tsy manam-paharoa anananay manome hery ny vahaolanay sy ny hevitra omen'ity data ity ho an'ny mpanjifanay izahay. Fantatsika fa tsy maintsy ilaina ny fahafantarana ny angon-drakitra mba hahombiazan'ny programa marketing amin'ny mailaka, ary zava-dehibe ny hanapahan-kevitry ny mpivarotra mifototra amin'ny angona avy amin'ny tena mpanjifany. Matoky izahay amin'ny filazana fa ireo mpivarotra mailaka izay tena te hampitombo ny fandaharan'asa mailaka ary hahita ROI nohatsaraina amin'ny mailaka dia hahazo tombony amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Return Path. Araka ny voalazanao, manana angon-drakitra izahay, ny fifandraisan'ny indostria ary ny fahalalana mailaka manam-pahaizana izay afaka manampy ny mpivarotra hampitombo ny fidiram-bolan'izy ireo amin'ny mailaka amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fidirana amin'ny mailaka, ny fananganana fifandraisana amin'ny mpanjifa tsara kokoa, ary ny fanatsarana ny mailaka ho fanatsarana ny fifandraisana.
Aug 17, 2016 amin'ny 11: 52 AM
Misaotra noho ny nanokana fotoana hanohanana. Tsy isalasalana fa ny sakany, ny fahatratrarana ary ny lalana nalehan'ny Return Path tamin'ny indostrian'ny fanaterana. Misaotra tamin'ny fanazavana ny olan'ny fidirana angona ihany koa.
Tsara foana ny fifaninanana, ary rehefa nampiasa ny fitaovan'i 250ok ho an'ny ESP-nay manokana izahay, dia nahavariana tanteraka ny vokatra. Koa raha namana aho ary mpanohana azy ireo dia mpanjifa sy mpampiasa ny sehatra misy azy ihany koa izahay. Tsy mitongilana tanteraka io valin-tenin'ny sehatra io – tsy hanao tolo-kevitra mihitsy aho ho an'ny sehatra iray izay tsy nampiasako voalohany.
5 Desambra 2016 à 12:02
Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny delivrability any Frantsa, gaga aho fa manoro hevitra anao ny RP hanatsara ny fampisehoana amin'ny Orange. Orange dia tsy mampiasa RP Certification.
Dec 6, 2016 amin'ny 4: 21 AM
Eny, manao izany izy ireo: https://blog.returnpath.com/orange-partners-with-return-path-to-maximise-its-subscribers-email-experience/
18 Desambra 2017 à 2:05
Manontany tena momba ny fampitahana vidiny ihany koa aho. Mampiasa 250ok aho amin'izao fotoana izao, saingy misalasala aho amin'ny fandehanana amin'ny fizotran'ny demo nefa farafaharatsiny tsy mahafantatra ny fampitahana ny vidiny eo anelanelan'ny 250ok sy ny lalana miverina.